हरिवंशको गाइजात्रा भिडियो ‘तिमी के को जान्ने ? सार्वजनिक (भिडियोसहित) « Pen Nepal
हरिवंशको गाइजात्रा भिडियो ‘तिमी के को जान्ने ? सार्वजनिक (भिडियोसहित)
Published On : 30 July, 2020 5:57 pm By : पेननेपाल
काठमाडौं । कलाकार हरिवंश आचार्यले ‘तिमी के को जान्ने’ बोलको गाइजात्रा गीत सार्वजनिक गरेका छन् । हरिवंशकै शब्द, स्वर तथा संगीतमा तयार भएको यो गीतले देशको समसामयिक बिषयमा ब्यङ्ग्य प्रहार गरेको छ । गायक आचार्यको यो गीतले शक्तिमा रहेको एक नेताको चाँकडी कसरी गरिन्छ र उसले आफूलाई कसरी देवत्वकरण गरिरहेको छ भन्ने बिषयमा ब्यङ्ग्य प्रहार गर्न खोजेको छ ।
शक्तिमा रहेको मानिसलाई कसरी देवत्वकरण गरिएको छ भन्ने पनि गीतमा बताउन खोजिएको छ । सागरराज शर्माको निर्देशनमा तयार भएको यो गीतको भिडियोमा हरि हुमागाँइको छायांकन, सुशिल न्यौपानेको सम्पादन तथा भीएफएक्स छ ।
भिडियोमा हरिवंश आचार्यलाई नेताको भूमिकामा देख्न सकिन्छ । उनको साथमा शशिकुमार खड्का, किरण तुलाधर, विकास भट्टराई, सुश्मा कार्की लगायतले भिडियोमा अभिनय गरेका छन् । यो गीतलाई नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुमा समर्पित गरिएको छ ।
‘बल्ल बल्ल भेट भो’ मा निरञ्जली र दयाको रोमान्स (भिडियोसमेत)
काठमाडौं । दिपा लामा र तेम्बा शेर्पाको आवाजमा समावेश ‘बल्ल बल्ल भेट भो’ बोलको गीतको
रियाका लागि अध्ययन सुमनको ट्वीट ‘तिम्रो वास्तविकताको चाँडै पर्दाफस हुनेछ’
एजेन्सी । सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्यु भएको एक महिना बढी समय बितिसकेको छ तर उनको
सुशान्त आत्महत्याले लियो नयाँ मोड, सुशान्तका पिताले दिए प्रेमिका रियाविरुद्ध उजुरी
काठमाडौं । भारतीय चलचित्र अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको आत्महत्या प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।
नग्न योगा यर्ने यी युवतीको फोटो भाइरल (हेनुहोस् अद्भुत फोटोहरू)
एजेन्सी । यी भूतपूर्व मोडेल हुन्, जसले धेरैलाई उनको अद्भुत योग पोजबाट प्रेरणा दिन्छिन् ,उनी